Holland America's Rotterdam waa $4.1 milyan oo ah goob faneed sabaynaysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Holland America ee Rotterdam waa $4.1 milyan
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • dhaqanka • Education • Entertainment • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Holland America ee Rotterdam waa $4.1 milyan
Holland America Line's Rotterdam waa madxaf ku yaal badda oo leh 2,645 xabbadood oo shaqooyin kala duwan ah oo qiimahoodu u dhexeeyo $500 ilaa $620,000 kaas oo ka kooban sagxadaha, qolalka dadweynaha iyo qolalka dawladda.
In ka badan 2,500 oo xabbo oo ka socda daraasiin farshaxaniyaal caalami ah ayaa kor u qaaday naqshadda gudaha ee Rotterdam.
Ururinta farshaxanka ee Rotterdam ayaa lagu qiimeeyay in ka badan $4.1 milyan waxaana soo xareeyay YSA Design oo fadhigeedu yahay Oslo iyo ArtLink oo fadhigeedu yahay London.
In ka badan 37 jinsiyadood ayaa waxaa matalaya fannaaniinta Rotterdam, iyadoo tirada ugu badan ee wax ku biiriyay ay ka yimaadeen Nederlaan, Mareykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska.
Khadka Holland America maraakiibta ayaa muddo dheer loo tixgalin jiray inay yihiin goobo farshaxan oo sabeynaya ururinta baaxadda leh ee madxafyada tayada leh. Goorma Rotterdam waxay dejinaysaa shiraac markii ugu horreysay Oktoobar 20, 2021, martida waxay ku jiraan safar muuqaal ah oo faa'iido leh oo leh qaar ka mid ah kuwa ugu fakarka-kicinta, cajiibka ah iyo qaybaha geesinimada leh ee markabka - oo ay ku jiraan shaqooyinka taariikhiga ah iyo xusuusta laga helay maraakiibtii hore ee la jeclaa.
RotterdamUrurinta farshaxanka waxaa lagu qiimeeyay in ka badan $4.1 milyan waxaana soo xareeyay YSA Design oo fadhigeedu yahay Oslo iyo ArtLink fadhigeedu yahay London, kuwaas oo la kaashaday nashqadeynta martigelinta ee Tihany Design. Natiijadu waa matxaf ku yaal badda oo leh 2,645 xabbadood oo shaqooyin kala duwan ah oo qiimahoodu u dhexeeyo $500 ilaa $620,000 kaas oo ka kooban sagxadaha, qolalka dadweynaha iyo qolalka dawladda.
In ka badan 37 jinsiyadood ayaa ka wakiil ah Rotterdamfanaaniinta, oo leh tirada ugu badan ee wax ku darsaday ee ka yimid Nederland, Maraykanka iyo Boqortooyada Ingiriiska. Fanaaniinta ayaa sidoo kale ka soo jeeda Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Republic of Korea, Norway, Filibiin, Poland, Portugal, Romania, Russia, Scotland, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey iyo Ukraine.
Qaybo badan oo ka mid ah waxay diiradda saaraan madadaalada, soo bandhiga mawduucyada muusiga, qoob ka ciyaarka iyo dhaqdhaqaaqa, iyagoo u duuban sheekada markabka ee "codka cusub ee socdaalka" ee fanka. Shaqooyinku waxay ku jiraan warbaahin badan, oo ay ku jiraan sawir qaadis, rinjiyeyn, warbaahin isku dhafan, sawir-qaadid, daabacado iyo farshaxan.